पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन् |
प्रकाशित मिति :2018-07-12 10:45:48
गएको जेठ महिनामा गरिबी निवारण कोषकी एक कर्मचारीलाई कार्यालयकै कार्यकारी निर्देशकले यौन हिंसा गरेको घटना सार्वजनिक भयो ।
महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायबारे कार्यालयमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय महिला आयोग, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसम्म पुगेर न्याय दिलाइपाउँ भनिन् । मौखिक, लिखित उजुरी गरिन् । संचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक भइन् ।
उनी आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले कार्यस्थलमा भएको यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे कार्यस्थलको व्यवस्थापनले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा उजुरी हेर्ने निकायमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब वर्तमानमा उब्जिएको प्रश्नतर्फ लागौं, एउटी महिला जसले आफू विरुद्ध यौन शोषण भएको कुरा पटकपटक बताएकी छन् (हामीसँग उहाँले आफूमाथि यौन हिंसा भयो भनि बोलेको कुराको अडियो भिडियो सुरक्षित छ) । आफू पीडित भएको सार्वजनिक गरेकी छन् । तिनै महिला आफूमाथि भएको अन्याय ‘गलत हो’ भन्दै मिल्नतर्फ लाग्छिन् भने यसको संकेत के हुन सक्छ ?
महिला अधिकारको विषयलाई सतही रुपमा बुझ्ने मान्छेले महिलाका न्यायको कुराहरूमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी पनि गर्दै आएका छन् । जसको जमात ठूलो छ ।
के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ ? यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?
उनीमाथि अन्याय भएको थिएन भने ती महिलालाई कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीको मानमर्दन गर्ने अधिकार कसले दियो ? के महिलाको आँशु मात्रै सत्यको प्रमाण बन्न सक्छ ? यदि होइन र पुरुषको पनि चरित्र हुन्छ भने नहकुल केसीले गुमाएको प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?
पुरुष पनि इज्जतका हकदार हुन् । रिस साँध्न उनीहरुको बदनाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो प्रश्न न्यायमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको हो ।